Armati Custom Faucet Vahaolana
Armati manome Hotel tetikasa / homeowners ny fahafahana ampanjifaina ny lakozia sy ny efitra fandroana teti-dratsy amin'ny alalan'ny tombony manaraka ireto:
Wide isan-karazany 62 farany safidy
Isan-karazany ny famoriam-bola sy ny fomba
Complete vahaolana ho an'ny lavatory, Kovetabe fandroana & ranonorana, ary ny lakozia
Afangaroy sy lalao faucets, famohana, ranonorana, ary vita
In-trano injeniera ho an'ny fomba amam-panao fixture zavatra ilaina
Miaraka Armati faucet, ny safidy dia tsy misy farany, ny endrika no uncompromised, sy ny fahitana no tanteraka.
1) .First Atitany mpamorona / Hotel mpamorona (mpanjifa) Mety hanome hevitra Armati faucet sasany na Sketch, dia mety hiova ny injeniera azy ho any solosaina endrika.
2) .Engineer hatrany ho nomerika mamaly ny mpanjifa ny famolavolana.
3) .Engineer mety miresaka amin'ny mpanjifa ny anaty rafitra, mba hahazo antoka ny rano ka hanome fomba matihanina heviny ny fanovana.
4) .After CAD nahatan-fandraisana ho mpikambana, dia mety mampiasa milina ny vokatra CNC santionany ity.
Ambony dia ankapobeny fomba fanao faucet ho an'ny vahaolana, hitarika ny fotoana avy 10 andro mba 4 herinandro, izany dia miankina amin'ny may sarotra ny famolavolana sy ny efa misy bobongolo izay ananantsika.
Ny raharaha vao haingana avy amin'ny famolavolana ny famokarana faobe ihany no vidin'izany 45 andro.
Shenzhen Hui Hotel dia maoderina 5 kintana trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny mpamorona te manam-paharoa faucet mifanaraka ny mahitsizoro hotely logo.
dia mamorona iray tokan-tena ambaratonga fanavaozana sy spout hihaona mpanjifa ny fepetra.
Misy 88 efitra amin'ny trano fandraisam-bahiny mihaja izany, ary izany dia ekena ho fanao faucet famokarana.